Ezypta: Voafonja asesika toy ny Sardine · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2008 23:46 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, Shqip, Italiano, 繁體中文, 简体中文, عربي, English
Gadra atao antontany ao anaty baravy? Nampiseho fanitsakitsahana zon'olombelona ao amin'ny bolongany malaza Misr Digital indray ilay Ezipsiana mpamaham-bolongana Wael Abbas efa nandrombaka loka.
Wael no manazava:
Nalefa tamin'ny messenger-ko nopihina avy tamin'ny finday tany amin'ny komisarian'ny polisy iray io sary io – fa tsy fantatro hoe taiza – ary araka ny hitanareo dia vita tamin'ny rairaim-by ny trano itazonana ireo voafonja ho toy ny gidro. Tena tsy manaja ny zon'olombelona ary ratsy kokoa noho ny atao amin'ny biby aza izao fomba izao satria hanahy ianao fa mety hahafaty ny manao tahaka izao. Sary sarotra eritreretina eny fa na dia anaty hosodoko foroporonina aza, eny fa na dia eritreritra tsy mifaditrovana dia iza no hiresaka momba ny olona asesika ka ny sasany mitaingina ny hafa? Na izany aza, mahasehaka ny teny arivo ny sary iray ary enga anie i Allah hiaro ny hairaha ho antsika.
Tsy nahaloa-peo ny mpaneho hevitra.
Misr Al Muslima no manoratra:
Tsy atao na any Abu Ghraib na any Guantanamo Bay izao. Tsy avy amin'ny science fiction ihany koa. Fa dia nilatsaka hatraiza loatra ny Ezypsiana, hidiana toy ny biby, ary ratsy karakara kokoa aza? Hamindra fo amintsika anie i Allah.
Hamoodi no niteny:
Mpanao kolikoly avokoa ny polisy any amin'ny tany arabo
Ary nampian'i Mohamed an-tarehiratsy hoe:
Tena nipoiran'ny sivilizasiona tokoa i Ezypta. ho avy tsy ho ela koa ny fanimbazimbana ny mahaolona hafa indray
Haitham, kosa na izany aza, nanazava moramora hoe:
Namboarina tamin'ny photoshop io sary io 😛